सरकारलार्इ तरकारी किसानको चिठी — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » पत्रपत्रीका, मुख्य समाचार, समचार → सरकारलार्इ तरकारी किसानको चिठी
सरकारलार्इ तरकारी किसानको चिठी
November 6, 2015२१७ पटक
सरकार, मैले घर धितो राखेर नेपालमा नै केही गरौं भनेर अरुको जग्गा भाडामा लिएर युवा स्वरोजगार बन्ने हेतुले तरकारी खेती सुरु गरें । राम्रै पनि चलेको छ र चलाएको छु । म लगायत अन्य १५\_२० जनालाई रोजगारी पनि दिएको छु । एउटा सफल युवा कृषि उद्यमी बन्ने सपना बनाएको छु र त्यसैको लागि लागिरहेको छु ।
तर, सरकार दुःखका साथ भन्नुपर्छ, अब यो मेरो सपना दिवा सपना मात्र हो भन्ने लागिरहेको छ । मैले सरकारलाई तिर्ने कर पनि तिरिरहेकै छु । सरकार, मैले अब आएर बैंकको ऋण पनि तिर्न नसक्ने भइसकें । किनकि मेरो कृषि फर्ममा उत्पादन भएको सामान बजारमा लान नसकेको आज एक महिना भैसक्यो । सामान सबै बारीमै कुहिएर गहिरहेको छ । कामदारलाई तलब पनि दिन सकिरहेको छैन । यो अवस्थामा म के गरुँ सरकार ?
मसँग पढाइका पनि सर्टिफिकेटहरु छन् । कि ती सर्टिफिकेट देखाएर विदेशमा ज्यालादारी गर्न जाउँ सरकार ?
हैन भने नेपाल सरकारले किन कृषकको उत्पादित सामाग्री बजार पुर्याउन इन्धनको व्यवस्था गर्दैन ? मन्त्रीको अघि-पछि ४\_५ वटा गाडी कुदाउन पुग्ने इन्धनको व्यवस्था हुने, हामी कृषकको उत्पादित सामाग्री बजार पुर्याउन इन्धन नहुने, यो के हो सरकार ?
सरकार, मन्त्रीको अघि-पछि धेरै गाडी कुदाउँदैमा मन्त्रीको सुरक्षा हुँदैन । यहाँ मन्त्रीको सुरक्षा गर्ने हो भने एउटा गाडी नै काफी छ, न कि ४ वा ५ वटा ।
खै कुन मन्त्रीको वा नेताको गाडी आजसम्म इन्धन अभावले थन्किएको छ ? खै कुन नेता आज साइकलमा हिंडेका छन् ? कुन मन्त्री इन्धनको अभावले घरमा नै बस्न बाध्य छन् ?
कुन नेता तथा कर्मचारीको चुलो आजसम्म निभेको छ ? निभेको भए आज किन प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति चुनिँदा ठुल ठुला पार्टी तथा भोज आयोजना हुन्थे ? ती भोज भतेरमा के आगोले खाना बनाइएको छ ? नत्र भने किन सरकार आफैं मात्र उपयोग गर्ने ? यही हो नेपाल सरकारको मितव्ययिता ?
मेरो घरमा ग्यास नभएको त महिना दिन भैसक्यो । यो त म पात्र मात्र हुँ । म जस्ता हजारौं नेपालीको चुलो निभेको होला खै पारदर्शी तरिकाले ग्यास तथा इन्धन बाँडिएको ? म कुनै राजनैतिक पार्टीको कार्यकर्ता भएको भए आज मेरो तरकारी खेर जाने थिएन, इन्धनको अभावले ? खै सरकार तरकारी बोक्ने गाडीलाई इन्धन दिएको ?
खै सरकार, आफैंले बोलेको नपुर्याउनेलाई म अब कसरी इमान्दार नागरिक भएर कर तिरौं सरकार ? मेरो तरकारी बजारमा गएको छैन भनेर बैंकले मेरो ब्याज मिनाहा गरिदेला र सरकार ?
ममाथि निर्भर वा मेरो कृषि फर्ममाथि निर्भर कामदारले मेरो समस्या बुझेर तलब नदिए हुन्छ सरकार ? यी यावत कुराको जवाफ मेरो सरकारसँग होला । पक्कै छैन । किनकि सरकारलाई मजस्तो सानो तिनो कृषकले भनेको कुरा सरकारलाई के मतलव ? मतलब छ त आफ्नै कुर्सीको, आफ्नै कार्यकर्ताको । कि कसो सरकार ? हामी जनता त मरे पनि लुतो न कन्याइ । भोट हाल्ने कार्यकर्ता छँदैछन् । कि कसो सरकार ?
अन्तमा, मलाई विदेशमा ज्याला दारी काम गर्न पठाउन बाध्य बनाएकोमा सरकारप्रति सदैव आभारी ।